Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ebe njem kacha mma maka 2022
Lonely Planet taa ekpughere obodo, obodo na mpaghara iri ya kachasị elu ịga leta n'afọ na-abịa site na mwepụta nke Lonely Planet's Best in Travel 10.
Kachasị mma na Njem 2022 bụ mkpokọta 17th nke Lonely Planet nke ebe kacha ewu ewu n'ụwa yana ahụmịhe njem ga-enwerịrị maka afọ na-abịa. Mbipụta a na-elekwasị anya na ahụmịhe njem na-adigide kachasị mma - ịhụ na ndị njem ga-enwe mmetụta dị mma n'ebe ọ bụla ha họọrọ ịga.
Cook Islands dịpụrụ adịpụ na nganga nọọrọ onwe ya - otu n'ime mba kacha nta n'ụwa - na-ekwu na ebe a na-achọsi ike dị ka mba nke mbụ ga-achọ na 2022, ebe Norway nọrọ nke abụọ na Mauritius nke atọ.
Mpaghara Lonely Planet-otu maka 2022 bụ Westfjords, Iceland, mpaghara agwaetiti ahụ nke njem nlegharị anya na-emetụtaghị ebe ndị obodo na-arụkọ ọrụ ọnụ iji chebe na kwalite ọdịdị ala ha mara mma. West Virginia, USA na-esote nke abụọ, Xingshuabanna na-esote China.
Ọnụọgụ-otu obodo Auckland, New Zealand ka amatara maka ọnọdụ ọdịbendị ya na-ama ifuru ebe a na-ahụ maka imepụta obodo, ebe Taipei, Taiwan nọ n'ọkwa nke abụọ, yana Freiburg, Germany nọ n'ọkwa nke atọ.
Kwa afọ, Lonely Planet's Best in Travel lists na-amalite site na nhọpụta sitere na nnukwu obodo Lonely Planet nke ndị ọrụ, ndị edemede, ndị na-ede blọgụ, ndị mmekọ na-ebipụta na ndị ọzọ. Ndị otu ọkachamara njem anyị na-ewepụ nhọpụta ndị a na naanị mba 10, mpaghara 10 na obodo iri. A na-ahọrọ nke ọ bụla maka isiokwu ya, ahụmịhe pụrụ iche, ihe 'wow' na ntinye aka ya na-aga n'ihu maka omume njem nlegharị anya na-adigide.
Dị ka Lonely Planet's VP of Experience Tom Hall, ntọhapụ nke Lonely Planet's kwa afọ "ndepụta ọkụ" nke ebe na ahụmahụ njem enweghị ike ịbụ karịa n'oge. "Mgbe nkwụsị nke mmanye gasịrị, ọ bụ oge iwepụ atụmatụ njem ndị ahụ echere ogologo oge na shelf wee mee ka ha bụrụ eziokwu," Hall kwuru na mwepụta nke ndepụta ahụ taa.
"Ndepụta ndị a na-eme ememe ụwa n'ụdị dị iche iche na-adọrọ adọrọ," Hall gara n'ihu. "Site n'ọdọ mmiri na oke ohia nke Cook Islands ruo na mmiri mmiri na ugwu nke Iceland's Westfjords, site na ihe ụtọ okike na obodo mepere emepe nke Auckland."
Dị ka mgbe niile Lonely Planet's Best in Travel na-ebuga njem ọhụrụ na ebe ndị a ma ama dị ka Norway na Dublin, Ireland, wee wepụta ụfọdụ bara nnukwu uru amachaghị dị ka Shikoku, Japan na ọmarịcha Scenic Rim nke Australia na nke a na-enyo enyo na obodo Freiburg na-adigide na Germany.
Ihe kacha mma Lonely Planet na njem 2022 - Ebe kacha elu nke iri
Mba iri kacha elu
Mpaghara 10 kacha elu
7. Ọzara Atacama, Chile
Obodo iri kacha elu
6. Nicosia/Lefkosia, Saịprọs
Joanne Patrick ekwu, sị:
October 29, 2021 na 12: 02
مرحبا, أنا سعيد جدا الآن لأنني حصلت اليوم على مبلغ قرضي بقيمة 60.000 دولار من هذه الشركة الجيدة بعد أن حاولت عدة شركات أخرى ولكن دون جدوى هنا رأيت إعلان شركة Joan Finance وقررت تجربته واتبعت جميع التعليمات. وهنا أنا سعيد اليوم ، يمكنك أيضًا الاتصال بهم إذا كنت بحاجة إلى قرض سريع[email protected]) أو whatsapp: +919144909366